Kutheni le nto inkampani yakho ingakhange iphumeze i-CMS? | Martech Zone
Kutheni le nto inkampani yakho ingakhange iphumeze i-CMS?
NgoMgqibelo, Oktobha 17, 2009 NgoMgqibelo, Oktobha 24, 2020 Douglas Karr
Zininzi iingxoxo kule bhlog malunga nokusebenza, ukuguqula ukusebenza, ukuthengisa ngaphakathi, ukusebenziseka kweinjini yokukhangela… nokuba ukuvavanywa kwezinto ezininzi kunye nokulungiswa kwephepha lokufika. Ngamanye amaxesha siyalibala ukuba iisayithi ezininzi zisese-1990's kwaye zinamaphepha anekhowudi e-HTML ahleliyo angatshintshanga kwiseva!
Ndingene nge-FTP, ndikhuphele ifayile kwaye ndenza uhlengahlengiso olufanelekileyo nge-Dreamweaver. Ndaye ndabafundisa ukuba wonke lo msebenzi wawungeyomfuneko. Omnye umthengi wamva nje wayethumele umthengisi wabo ukuba aye kuqeqesho lwe-HTML ukuze indawo yabo ihlaziywe. Oku bekungeyomfuneko. Ngelixa ulwazi lweetekhnoloji yewebhu luluncedo, inkqubo elungileyo yolawulo lomxholo inokubonelela inkampani yakho ngazo zonke izixhobo ezifunekayo zokugcina indawo yakho ihlaziywa mihla le ngelixa ususa izithintelo kwezemfundo nakwezobuchwephesha.
Ngeendleko zeeklasi okanye iintlawulo eziqhubekayo umfo wewebhu, ezi nkampani zinokuphumeza inkqubo yolawulo lomxholo eyomeleleyo abanokuyilawula.
Kumthengi omnye onjalo, iPhepha-Lite, a uxwebhu lokulawula uxwebhu, sisebenzise iWindowsPress. Zininzi ezinye izisombululo zolawulo lomxholo ezinokubakho kwintengiso, kodwa le inazo zonke iintsimbi kunye neempempe kwaye yayilungelelaniswa ngokulula neemfuno zomthengi.
Phantse wonke umbhalisi wesizinda ngoku unikezela ngenkqubo yolawulo lomxholo okanye ufakelo oluzenzekelayo lwazo ezinye iinkqubo zolawulo lomxholo. Ingcebiso yam ekuphela kwayo iya kuba kukunamathela kwiqonga elinokwamkelwa ngokubanzi kunye noluntu olukhulu lophuhliso olunayo.
Gcina ukhumbula ukuba ukufaka i-CMS yasimahla akukho simahla, nangona kunjalo. Ukuphuculwa kwesondlo kunyanzelekile! Ukuba yinkwenkwe enkulu kwibhlokhi ye-CMS yasimahla nayo iyaziboleka kwizaphuli-mthetho ezininzi ezizama ukwenza njalo my iqonga lakho. I-CMS yasimahla ebanjwe kwiqonga lokubamba ixabiso eliphantsi nayo ayinakumelana netoni yezithuthi-ifuna ukuba wenze njalo hlaziya iziseko zakho.
Izibonelelo zingaphezulu komngcipheko ukuba unendoda elungileyo yokugcina i-CMS yakho isempilweni, nangona kunjalo. Kunye nokufaka kunye nokumisela i-CMS:
Senze isiphelo sasemva ukulungiswa kweenjini zokukhangela ngeeplagi ezifanelekileyo kunye nefomathi yomxholo.
We ulungelelanise iphepha lokungena ukuze abathengi babo bakwazi Ngena kwaye ubone umxholo othintelweyo.
Siqwalasele kwaye satshintsha i-a quote iplagi yokujikeleza iikowuti zabathengi kwiphepha lasekhaya.
Sathenga saza safaka ifayile ye- isisombululo sefom eqinileyo ukuze babambe isikhokelo sokungena ngaphakathi.
Sihlaziye ifayile ye-htaccess ukuhambisa kwakhona amakhonkco amadala kwiindlela ezintsha kumxholo ofanayo. Sifakile ifayile ye- redirection iplagi ukusingatha iimfuno ezongezelelweyo zokuqondisa kwakhona. Oku kuhlala kulinyathelo elingakhathalelwanga ngabaqulunqi bewebhu kwaye banokubulala ukusebenza kwakho. Qinisekisa ukuba amakhonkco akho amadala asasebenza… khomba nje kumxholo omtsha!
Sifake imixholo kunye neeplagi ukuze indawo ibonelele ngokugqibeleleyo I-iPhone, iPod touch kunye nezinye izixhobo eziphathwayo. Abantu basebenzisa izixhobo eziphathwayo ukukhangela iisayithi ngakumbi nangakumbi… ingaba indawo yakho iyafundeka kwezi zixhobo?
Siqwalasele zentlanzi kumacandelo esiza anokuhamba nzulu ukuze abathengi bakwazi ukuhamba lula.
Ewe kunjalo, siqwalasele ii-Webmasters, ii-Stats plugins, kunye ne-Analytics ukuze inkampani ikwazi ukujonga ukugcwala kwayo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, siyaqhubeka nokunceda inkampani ukuba yamkele kwiqonga elitsha kwaye siyisebenzise ngokufanelekileyo. I-CMS enjengeWordPress inokuba nzima ekuqaleni. Ndiyakuqinisekisa ukuba kulula kakhulu kunokuchaza i-FTP kunye ne-HTML, nangona kunjalo!
Okokugqibela, nangona iWindowsPress liqonga elifanelekileyo lokubhloga, ndiyakholelwa ngokunyanisekileyo ukuba yeyona nkqubo yolawulo lomxholo ingcono. Kukho isoftware njengezisombululo zenkonzo ezinje Indlela yentengiso ezibonelela ngolawulo lwesiza, ukubhloga, kunye ne-ecommerce.
tags: CMSulawulo lokuqukethweInkqubo yolawulo lomxholoUkuThengiswa kweMpahla
Ibhranti yakho kufuneka ibe kwiMidiya yoLuntu
IAlterian iseka iBhunga leNtengiso yezeNtlalontle
Okt 21, 2009 ngexesha 12:42 AM
Utsho kakuhle, Doug.
Ngelixa bendikhe ndanamava afanayo nabanini bamashishini abaninzi beyenza ngendlela ebisenziwa ngayo kwinkulungwane ephelileyo, oku kuyinyani:
"I-CMS efana ne-WordPress inokuba nzima ekuqaleni."
Abanini bamashishini amancinci, ngakumbi, bafumana umsebenzi omninzi weCMS. Kuninzi kakhulu ekufuneka ukhunjulwe ukuba uxakekile uqhuba ishishini lakho kwaye uthumela into entsha rhoqo emva koko. Ngexesha ujikeleza usebenzisa iCMS kwakhona, ulibale ukuba uyenza njani na. Kwaye ngubani ofuna ukufunda imanyuwali?
I-WordPress ngokuqinisekileyo ingcono kakhulu kuneJoomla okanye iDrupal ngokwemigaqo yokusetyenziswa komlawuli jikelele. Ukuhamba komsebenzi kunengqiqo ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye ezimbini.
Athini amava akho ngeeCMSs kubanini bamashishini amancinci? Ngaba uzame ezinye iindlela "ezilula"?